Antanambao Antsirabe II :: Fatin-dehilahy nihantona tao amina trano vao atsangana • AoRaha
Antanambao Antsirabe II Fatin-dehilahy nihantona tao amina trano vao atsangana
Fatin-dehilahy iray efa tsy nisy nahafantarana azy intsony no hita tao amina trano vao amboarina iray tao amin’ny renivohitry ny kaominina ambanivohitra Antanambao, distrikan’Antsirabe II, tamin’ny marainan’ny talata lasa teo. Tokony ho 500 metatra miala ny tsena ao an-toerana no misy an’ity trano an-dalampanorenana ity, saingy efa fotoana naharitraritra no niato ny asa.
Tsy nisy nahatsikaritra noho izany ny tranga heverina ho niseho, efa ho andro maromaro, raha tsy tamin’io talata io. Olona nikasa hanadio sy hanohy ny taontrano no nahita ny faty nihantona teo amin’ny valin-drihana. Nampandre ny zandary sy ny mpitsabo avy hatrany izy.
Nandritra ny fizahana natao dia tsy nahitana taratasy na zavatra mety hamantarana ny mombamomba azy teny amin’ilay lehilahy. Nilaza ho tsy nisy nahalala azy ihany koa ireo mponina any antoerana, izay vory marobe raha vao nahare ny zava-nisy.
Tombanana ho vahiny na mpandalo, araka izany, ity lehilahy hita faty tao antranon’olona vao amboarina ity. Nalevina ao amin’ny fasam-bahiny izy. Miteraka ahiahy ho an’ireo mpanao famotorana ny fahitana azy nihantona ka hiheveran’ny maro azy ho namono tena.
Tsy mazava anefa izany satria manamafy ny firosoan’izy ireo amin’ny fanadihadiana lalina ny fahitana ny hanifin’ny tady nihantonany. Teo koa ny fahitana ny tongony nipetaka tamin’ny tany. Ahiana ho vono olona no niseho. Ny fahafantarana an’ireo havany ihany no irika hahazoan’ireo mpanao fanadihadiana ny loharanom-baovao azo hiaingana amin’ny famantarana ny marina.